Apple dia manakarama ny filankevitry ny fahitalavitra Gaumont ho lohan'ny famokarana | Avy amin'ny mac aho
Apple dia efa nanana Lohan'ny famokarana atiny am-boalohany ny rojo. Taorian'ny hetsiky ny orinasa momba ny fanendrena toerana dia afaka mahazo ny hevitr'ireo hetsik'i Apple amin'ny fampandrosoana ny fantsona fahitalavitra izy.
Amin'ity tranga ity, fantatray ny fandraisana ny Carol Trussell, amin'ny maha Head of Production. Hatramin'izao, Trussell dia nitana andraikitra fitantanana tao amin'ny Televiziona Gaumont nanomboka ny taona 2013, izay nanara-maso ny asan'ny famokarana atiny ao anaty tambajotra, toerana iray mitovy amin'ny takiana ao amin'ny Apple, araka ny fantatsika avy amin'ny tatitra nomanin'i Fe-potoana.
Na dia tsy fantatry ny besinimaro aza ny firaketana an'i Carol Trussell, Izy dia niara-niasa tamin'ny andiany izay fantatra eran'izao tontolo izao amin'ny hoe Narcos na Hannibal, eo amin'ny maro. Saingy niverina ny zavatra niainany nandritra ny taona maro. Ao amin'ny tohiny dia afaka mahita toerana ao amin'ny Paramount na Lorimar Television isika.
Trussell dia nanatevin-daharana an'i Gaumont taorian'ny naha-mpamokatra azy tamin'ny vanim-potoana voalohany tamin'ny andiany NBC Hannibal. Izy koa dia mpamokatra andian-dahatsoratra toa an'i Roswell, True Blood, Unnatural History, ary What About Brian. Trussell dia nanomboka ny asany tamin'ny famokarana sy ny fampandrosoana tao amin'ny Televiziona Paramount sy Lorimar.
Apple tsikelikely dia mamorona ekipa manana fahalalana sy traikefa avo, hamolavola ny fandaharany manokana. Hatramin'izao dia nanakarama mpanatanteraka avy amin'ny: Amazon, Studios, Sony, WGN, ary Televiziona Universal izy. Eo an-tampony dia misy an'i Jamie Ehrlicht sy Zack Van Amburg, izay anjaran'izy ireo ny mitarika ny fandaharana video ho an'i Apple rehetra. Samy nokaramain'i Eddy Cue mivantana, avy amin'ny Sony Television.
Mbola ho hita eo izay karazana atiny fanampiny ho tafiditra ao amin'ilay lampihazo, ary mazava ho azy, ireo fiasa na votoaty tany am-boalohany omen'ny Apple isaky ny vokatra ireo. Amin'izao fotoana izao Apple dia voalaza fa manana tetibola $ 1.000 miliara hizarana izany amin'ny famokarana atiny voalohany, na dia mandraka ankehitriny aza, ny orinasa dia tsy nanambara fampahalalana, tsy momba ny fampiasam-bola ihany, fa koa mifandraika amin'ny atiny hatolony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia manakarama fitantanana fahitalavitra Gaumont ho lohan'ny famokarana